Diseembar – Blast Off to Kindergarten
Tababarka Layliska Bishan
Ilmahaaga u sheeg waxa uu ka koobanyahay qoyska, dhaqankiina waxa aad aminsantihiin. Ilmahaaga u sheeg cilaaqaadka uu la leeyahay xubnaha qoyskiina: willkaaga, walaalka ka weyn, ilmaha adeer loo yahay, ilmaha awoowe lo yahay. U sheeg hiddaha iyo dhaqanka reerkiina uu caadada u leeyahay.
Ilmaha sii fursado ay ku bartaan dhaqamada kale ee la deggan jaaliyaddiina. U akhri buugag ka sheekeeya jilayaan ka socda dhaqamo iyo dalal kale. Ha la dhagaysto muusikada waddan kale. U sheeg ciidaha uu reerkiina uu u xuso iyo ciidaha ay dadka kale xusaan.
Isku soo uruuriya sawirrada qoyska oo adiga iyo ilmahaaga buug ku wada keydiya ama wada gali buug yar. Iku daya in aad raadisaan oo heshaan sawirro badan ee dadka qaraabada ah. Tababarrada barashada xirfadaha qorista, ilmhaaga ka caawi in ay qoraan warbixin gaaban ee ku saabsan sawrirrada albumka ama buugga yar ku jira. U sheeg oo wax ka qora dadka sawirrada ku jira, waxa iyaga ka dhigaya dad qaali ah, waxa ay ilmahaaga u yihiin iyo sababta muhiim ka dhigaysa in sawirkaas la qaado.
Ilmahaaga la cayaar “Cayaarta Qoyska”. Warqad ku qora magacyada xubnaha qoyska oo baaquli ku rida. Qofkasta oo cayaarta ku jira ha doorto jeex warqadeed oo qofka ku sawiran oo kale ha iska doondoono iyo kuwa cayaarta ku jira ay sheegaan qofkaas qofka uu ahaan karo.
Ma taqaanna waddamada ay ku dhashteen xubanaha qoyskaaga? Raadi buugag ama sawirro muujinada dadka, dharka, iyo dhulka waddamadaas. Baro oo ka hadla cuntada, waxaylaha lagu cayaaro, ciidaha, iyo hiddaha iyo dhaqanka oo saameyey nolosha xubnahaha qaraabadaada.
Soo uruuriya sawirrada qoysaska. Waxa aad ka soo saartaan maqaallada sawirrada qoysaska iyo shakhsiyaadka da’ kasta leh iyo jinsiyad kasta leh. Ilmahaaga inta uu mid kasta ka soo jaro koollo ha mariyo waraaqna ha ku dhejiyo. Ilmahaaga weydiiso in uu sawirrada u kala sooco lab ama dhedding, jinsiga, cilaaqaadka, da’da iyo wayaalo badan oo kale. Weydii su’aalaha “Maxay kula tahay….?” ee ku saabasan dadka sawirrada ku jira.
Ilmahaaga ku soo dhowey in uu ka caawiyo diyaarinta liistada cuntada, suuqa kuu raaco, iyo marka aad kaararka aad direysid. Kor ugu dhawaaq eray kasta ee aad ka akhrinaysa magaca shayga, calaamadaha, iyo liistada. Qor erayo uu ilmhaaga ka helo (sida “mooska”) adiga oo adeegsanayo qalmaanta midabyad leh, calaamadeyaha, ama qalmaan midabya kala duwan.
Ka soo fakar gabayo gaagaaban oo leh erayada isshabbaha ee isku loogu dhawaaqo. Erayo isku si u dhawaaqa ee maado leh isku aruuri. Heeso qaad.
Cafiimaadka Ha Laga Qaado
Ilmahaaga bar in iskiisa uu u labbisto. Ku caawi in uu barbarto in uu jaakadda ama koodka uu iska bixiyo. Ha la barbarto suuldhabalaynta, sida guluusyada loo xirto, iyo lo xirto shaatiyada, sarawiisha, iyo jaakadaha. Ha barbarto xirashada suunka gaaria iyo sida kaba xargaha lagu xirto.